रोमान्टिक मोडल सरिस्मा मगरसंगको ताजा रमाइलो कुराकानी | onlineharpal.com
रोमान्टिक मोडल सरिस्मा मगरसंगको ताजा रमाइलो कुराकानी
on: १९ बैशाख २०७४, मंगलवार १९:४२ In: bignews1, अन्तर्वाता, मनोरन्जन
आदरणीय दर्शक स्रोता आज हामी फेरी नयाँ पाहुनाको साथमा उपस्थित भाइ सकेका छौ। उहाँ नेपाली मोडलिङ अकासकी एक चर्चित मोडल हुनुहुन्छ र पछिल्लो समयमा उनि चर्चित गायिका पनि बन्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ सरिस्मा मगर उहाँलाइ सबै भन्दा मनपर्ने ठाउँ मध्ये पोखरा असाध्यै मन पर्छ रे, सरिस्माको स्वभाब चै चन्चले, चुलबुले सधै हाँसी राख्ने रमाइलो गर्ने खालको छ रे र उहाँले सबै भन्दा मिठो परिकार चै मटन तयार गर्नु हुन्छ रे आउनुहोस उहाँसंग हाम्रो खबर कोसेली डटकमको सम्बादाताले गरेको छोटो छोटो मिठो मिठो रमाइलो कुराकानी हेरौ।
खबर कोसेली डटकममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।
– धन्यवाद खबर कोसेलीलाइ
दर्शक स्रोतालाई जानकारी गराउनु पर्दा यतिखेर यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ ?
– अहिले चाही म सुटिङ भइराछ यसैमा ब्यास्त छु।
यहाँको स्वभाब भनु यानिकी नेचर चाहि कस्तो खालको छ त ?
– मेरो नेचर भन्नु पर्दा म अलि चन्चले टाइप छु सानै देखि म अलिक चुलबुले टाइपको थिएँ।
यहाँको जीवनमा घटेको कुनै त्यस्तो सुखद क्षण छ ?
– लाइफमा सुख दुख त आइनै रहन्छ तर म जति खेर पनि खुसि नै हुन्छु स्याडमा हुदिन एकदम ह्याप्पी रहन्छु।
यहाँ फुर्सदको समयमा चाहि के गर्नु हुन्छ ?
– म फुर्सदको समयमा चाहि अलि रमाइलो मुभीहरु हेर्न मन पराउछु र साथीहरुसंग घुम्ने बस्ने त्यस्तै हो।
अब यहाँको नयाँ कोसेली दर्शक स्रोताहरुलाई के आउँदै छ त ?
– नयाँ कोसेली मेरो मोडलिङ त गरिराको छु त्यसको साथमा नयाँ अलि डिजे टाइपको सङ लिएर आउँदै छु प्रकास दाजु र मेरो एकदम रोमान्टिक खालको छ सबै सङहरु मन पराइ दिनु भाछ र यो पनि मन पराइ दिनु हुनेछ भन्ने आसा गरेको छु।
टाइटल भन्न मिल्ला ?
– बजाई देउ डिजे दाइ डिस्कोमा दोहोरी।
यहाँलाइ लागेको कुनै अविस्मरणीय स्टेज प्रोग्राम ?
– अविस्मरणीय भन्दा पनि प्रोग्राम त सबै ठाउँ एकै खालको हुन्छ सबै ठाउँ रमाइलो नै हुन्छ त्यस्तो खास चाही छैन।
कुन स्टेज प्रोग्राम हो जहाँ यहाँलाइ दर्शकको धेरै हौसला मिलेको थियो धेरै सपोट मिलेको थियो ?
– नेपालमा त भइ नै राख्छ अनि अस्ति म दोस्रो चोटी मलेसिया जाँदा खेरि चाहि दर्शकहरुको एकदम धेरै यति धेरै कि हौसलाको त के कुरा यति धेरै रमाइलो भयो यति धेरै मन पराइ दिनु भयो धेरै खुशी लागेको थियो।
यहाँलाइ खुसि पार्न चाहि के गर्नु पर्ला ?
– मलाइ खुसि पार्न के गर्नु पर्छ भने म रिसाको बेलामा पनि हसाइ राख्नु पर्छ। मलाइ रमाइलो मुभी हेर्न जाउँ र रमाइलो ठाउँ घुम्न जाउँ भने म एकदम ह्याप्पी हुन्छु।
प्रेमको परिभाषा के हो जस्तो लाग्छ ?
– प्रेमको परिभाषा त साधारण हो माया गर्नु नै प्रेम हो त्यसमा जे पनि हुन सक्छ माया भनेको त्यो प्रेम नै हो। लभ भनेको माया हो।
यहाँले जीवनलाइ कसरी परिभाषा गर्नु हुन्छ ?
– जीवनमा दुख सुख भाइ राख्छ स्ट्रगल गर्ने पिरेड आइराख्छ तर म चाही जीवनलाइ सिम्पल तरिकाले लान्छु बाँचुन्जेल रमाइलो गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ।
तपाइलाइ सबै भन्दा मन पर्ने पहिरन ?
– पहिरन चाही म पार्टीमा जाँदा सारी, लेहेंगा लगाउछु र क्यजुवल हिड्दा खेरी स्कट, पेन्ट्स टिसटहरु लागाउछु त्यो ठाउँ अनुसार पनि हुन्छ।
नेपालको कुन ठाउँ चाहि यहाँलाइ सबै भन्दा बढी मन पर्छ ?
– मलाइ मन पर्ने ठाउँ भनेको पोखरा मलाइ फुर्सद भयो भने पोखरा नै जान्छु ।
यहाँको आफ्नो असल गुणहरु भन्नु पर्दा खेरि के के हो जस्तो लाग्छ ?
– आफ्नो असल गुण त अब सबै राम्रो लाग्छ अरुले मन पराउने नापराने पनि भाइ नै राख्छ तर मलाइ सबैले धेरै अन्डरस्ट्यानडिङ छ भन्नु हुन्छ अनि त्यति रिसाउदैन त्यस्तै भन्नु हुन्छ।
कुन विधाको नृत्य गर्न बढी रुचाउनु हुन्छ ?
– म आइटम सङहरुमा डान्स गर्न बढी रुचाउँछु जस्तै इन्दिरा जोशीको गीतहरुमा।
तपाइले तयार पार्नु पर्दा खेरी कुन परिकार मिठो बनाउनु हुन्छ ?
– म मटन, मटन बनाउदा निकै मजा आउँछ सबैले कस्तो मिठो बनाको भन्नु हुन्छ अनि मलाई मटन बनाउन इन्ट्रेस्ट लाग्छ।
फ्यानसंग बिताएको कुनै रमाइलो क्षण छ ?
– फ्यानहरु कति हुन्छ हुन्छ धेरै जना आएर फोटो खिची राखेको हुन्छ खास त्यस्तो रमाइलो क्षण छैन।
यहाँले गरेको कुनै रमाइलो यात्रा छ ?
– खास मेरो त्यस्तो रमाईयात्रा छैन प्रोग्राम को निम्ति जाँदा आफ्नो प्रस्तुती कसरी राम्रो गर्ने भनेर सोच्दै ठिक हुन्छ।
दर्शक स्रोताले भने झैँ यहाँ रोमान्टिक र हट नै हुनुहुन्छ त ?
– मलाइ त त्यस्तो लाग्दैन म अलि चन्चले छु अनि डान्सहरु पनि त्यस्तै गर्छु र मलाई मान्छेहरुले हट र सेक्सी भन्नु हुन्छ मानिसको हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्ने कुरा हो।
यहाँलाइ फ्यान फलोवरहरुको कल म्यासेज चाहि कतिको आउँछ नि ?
– त्यो त आइराख्छ तर मलाइ त्यस्तो नराम्रो म्यासेजहरु चाही पठाउँनु हुन्न राम्रो म्यासेजहरु मात्र पाठाउनु हुन्छ प्राय तारिफ गरेको म्यासेजहरु आउँछ।
यहाँ सारै राम्रो डान्स गर्नु हुन्छ यो कला कहाँबाट सिक्नु भयो ?
– यो कला बम्साणु गुण सरेको हुनु पर्छ मेरो मम्मी बाबा पनि पहिला डान्स गर्नु हुन्थ्यो रे म पनि सानै देखि डान्स गर्थे स्कुल कलेज सबै ठाउँ डान्स गर्दा गर्दै त्यस्तो भएको हो।
राष्ट्रको निम्ति के संदेश दिनु हुन्छ ?
– अहिले हाम्रो देश नेपालमा धेरै युवाहरु बेरोजगार हुनुहुन्छ र रोजगारीको लागि युवा युवती सबै विदेश पलायन भइ रहनु भाछ यो कुरालाई रोक्नु पर्यो देश हाँक्ने नेतृत्वले यतातिर ध्यान दिनु पर्यो नेपालमै रोजगारी सृजना गर्नु पर्यो भन्न चाहन्छु।
अन्त्यमा दर्शक स्रोताहरुलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
– पहिला त खबर कोसेलीलाइ धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो दाजु भाइ दिदि बहिनि दर्शक स्रोता सबैले मेरो गीतहरु र मेरो कामलाइ यति धेरै मन पराइ दिनु भाको छ माया गरिदिनु भाको छ त्यस्तै माया गरिदिनु होला मेरो नराम्रो कुराहरुको कमेन्ट पनि गरिदिनु होला त्यसले म आफुलाई निखार्दै जाने अबसर मिल्ने छ यति नै भन्न चाहन्छु।